नेपालमा ‘आइएसआइ’ गतिविधि बढे्को भारतीय प्रहरीको निष्कर्ष, नेपालतर्फ निगरानी बढाँउदै | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
नेपालमा ‘आइएसआइ’ गतिविधि बढे्को भारतीय प्रहरीको निष्कर्ष, नेपालतर्फ निगरानी बढाँउदै
आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा भारतको कानपुरमा गिरफ्तार गरिएका डा. जलीस अन्सारीको बयानका आधारमा भारतीय प्रहरीले नेपालतर्फ निगरानी बढाउन थालेको छ ।
गिरफ्तार गरिएका जलीसको सम्बन्ध नेपालमा रहेको र उनी नेपालमा पाकिस्तानी गुप्तचर संगठन ‘आइएसआइ’लाई मजबुत बनाउने भूमिकामा सक्रिय रहेको भारतीय प्रहरीको निष्कर्ष छ ।
शृङ्खलावद्ध विस्फोटमा दोषी ठहर भई अजमेर जेलमा आजीवन कारावासको सजाय भोग्दै आएका उनी जेलबाट दैनिक हाजिरीको शर्तमा केही दिनका लागि रिहा भएका थिए । कैदीले पाउने ‘पेरोल’ सुविधा प्रयोग गर्दै रिहा भएका उनी रिहाइको शर्त उल्लंघन गर्दै फरार भएपछि भारतीय प्रहरीले खोजी सुरु गरेको थियो ।
उत्तर प्रदेश प्रहरीले उनलाई कानपुरबाट नियन्त्रणमा लिएको बताइन्छ । भारतीय संचारमाध्यमअनुसार जलीसले उत्तर प्रदेशमै ठूलो आतंकवादी घटनाको लक्ष्य बनाएको भारतीय प्रहरीको अनुमान छ । उनी नेपाल जाने र नेपालमै स्थायी बसोबास गर्ने योजनामा रहेको तथ्यहरु खुलासा भएको पनि भारतीय संचारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यद्यपि जलीस कानपुरसम्म आउँदा क–कसलाई भेटे, उनी कुन उद्देश्यका लागि कानपुर पुगे र उनको सम्पर्कमा को–को थिए भन्नेबारे प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेको जनाइएको छ । हाल उनीसँग सोधपुछ भइरहे पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन्छ ।
नेपालका पूर्व सांसद मिर्जा दिलसाद बेगको हत्यापछि भारतले नेपालमा ‘आइएसआइ’को सक्रियताबारे खुलेरै टिप्पणी गर्न थालेको हो । भारतीय अधिकारीहरु मिर्जा दिलसाद बेगलाई ‘आइएसआइ’को एजेन्टका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । उनको हत्यामा ‘अन्डरवल्र्ड’ कै एक समूह सक्रिय रहेको भारतीय अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
जलीस भारतबाट भागेर नेपालतर्फ जान लागेको भारतीय अधिकारीहरुको भनाइ छ । उनी जेलमै रहँदा आइएसआइसँग सम्पर्कमा रहेको र भारतमा उनको ठूलो नेटवर्क अझै पनि रहेको भन्दै अधिकारीहरु उनी भाग्न खोज्नुको उद्देश्य र उनले बनाएको योजना खोतल्ने क्रममा नेपालतिर पनि चनाखो हुन थालेका हुन् ।
दुई दशकअघि काठमाडौँमा पूर्व सांसद मिर्जा दिलसाद बेगको गोली हानी हत्या भएको थियो । उनको हत्या कसले र किन ग¥यो भन्नेबारे नेपाली जनता लामो समयसम्म बेखबर रहे पनि उनको हत्याको विषयले भारतमा ठूलो प्राथमिकता पायो । किनकि भारतीय अधिकारीहरु उनलाई ‘आइएसआइ’ को एजेन्टका रुपमा हेर्दै आएका थिए ।
भारतीय अधिकारीहरु खुर्शिद आलमलाई पनि ‘आइएसआइ’ को एजेन्टकै रुपमा व्याख्या गर्दैछन् । आलमलाई ‘मुम्बई विस्फोट’ सँगसमेत जोडेर भारतीय अधिकारीहरुले लिने गरेका छन् ।
भारतीय सुरक्षा निकायका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भारतकै सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार मिर्जा दिलसाद बेगपछि खुर्शिद आलम नै नेपालमा आइएसआइका ठूला एजेन्टका रुपमा थिए ।